XASAASI: Miyay Doodii Beranbeu Durtaba Soo Laabatay? Madaxwene Perez Oo Kulan Dheer La Qaatay Tababare Solari & Waxa Uu Ka Doonayay Oo La Ogaaday. - GOOL24.NET
XASAASI: Miyay Doodii Beranbeu Durtaba Soo Laabatay? Madaxwene Perez Oo Kulan Dheer La Qaatay Tababare Solari & Waxa Uu Ka Doonayay Oo La Ogaaday.
Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez iyo tababaraha kooxdaas ee Santiago Solari ayaa kulan wada qaatay xalay iyadoo uu kulankani ahaa mid aan caadi ahayn marka laga reebo in Perez uu qolka labiska tago kaddib kulan kasta.
Dhacdadii ugu dambayaysay ayaa ah mid muhiim u ah xilli ciyaareedka Real Madrid iyaga oo u baahan inay kasoo kabtaan guuldarradii ugu dambaysay ee Santiago Bernabeu kaga soo gaadhay Girona toddobaadkan.
Sida laga soo xiganayo El Chiringuito de Jugones kulanka Solari iyo Perez ayaa qaatay wax ka badan laba saacadood iyadoo waxa ugu weyn ee uu madaxweynaha Madrid doonayay inuu ogaado ay ahayd xaalada xiddigaha kooxda gaar ahaan kaddib guuldarradii Girona taas oo soo celisay shakigii ka taagnaa kooxda mudooyin yar kahor.
Guuldaradaas ayaa ahayd mid Los Blancos dib u celin weyn ku samaynaysa kaddib bandhigyo badan oo wacan iyo kulamo guuldarro la’aan ah iyaga oo markale dib u furay tartankii horyaalka La Liga.
Waxa muhiimka ah ayaa ah in kulankaasi uu muujiyay in Real Madrid aysan wali wax badani iska bedelin iyadoo ay markale fashilantay aragtida tababaraha ee kulamada uu isku shaandhaynta shaxeed sameeyo.
Sida uu ku warramayo wargeyska Marca, Madaxda sarre ee Madrid ayaan doonayn inay wax daciifnimo ah ka arkaan go’aan qaadashada kooxooda ee kulanka toddobaadkan ee Levante.
Laakiin madaxdaas ayaa wali garab taagan ciyaartoyda kooxda iyo tababaraha oo ay qabaan rajada ah in niyadii kooxdu ay kusoo laabato sidii ay ahayd kahor kulankii Girona.